Planninghazi ụtụ bụ omume dị mma ịhazi ego ụlọ ọrụ iji mee ka ọnụego ụtụahịa dịkarịrị ala dị ka o kwere mee. Ọ bụ ezie na a na-ahụkarị ka ihe achọghị, ịtụ ụtụ isi abụghị iwu na-akwadoghị. Taxtụ ụtụ isi nwere ike ịdị n'ihi ọdịiche nke iwu obodo na nke mba niile, ndịrịta iche na nkwekọrịta ụtụ a kwubiri na n'ihi otu iwu a ga-esi kpuchie ma ọ bụ jubiga ókè.
The Law & More taxtụ ụtụ isi metụtara okwu Dutch na mba ụwa.
Na imekorita ndị mmekọ ụtụ anyị anyị na-enye ndụmọdụ ụtụ na ịhazi atụmatụ dị oke ọnụ ahịa ndị mmadụ na ezinụlọ ha, bụ ndị ma ọ bụ dabere na ụtụ Dutch. Ndi okacha amara n’echebara ihe ndi mmadu na achoro anya maka uzo ahia di iche-iche nke ndi Dutch na ndi ozo n’ulo mba nile. Anyị na-anọchitekwa ndị Dutch na ndị ahịa mba ụwa na mgbagha ụtụ mba ụwa ma na-eduzi usoro ịgba akwụkwọ ụtụ isi megide ndị isi ụtụ isi Dutch.
Law & More na-enyere aka n'ọtụtụ atụmatụ atụmatụ ụlọ na usoro azụmaahịa maka ndị ahịa na ụlọ ọrụ ha. Anyị bụ ọkachamara pụrụ iche n'ịkpa na itinye n'ọrụ nke usoro ọhụụ (iwu) na nhazi ikike iji nweta ihe dị iche iche maka ndị ahịa anyị iji nọgide na-agbaso ụtụ ma mezuo arụmọrụ ụtụ.